SiteKick: Ataovy mandeha ho azy ny fanaovana tatitra an-tsoratra White-Label ho an'ny mpanjifanao | Martech Zone
SiteKick: Ataovy mandeha ho azy ny fanaovana tatitra an-tsoratra White-Label ho an'ny mpanjifanao
Zoma, Septambra 4, 2020 Zoma, Septambra 4, 2020 Douglas Karr
Raha miasa ho an'ny mpanjifa marobe ianao dia mety ho sarotra ny manangana tatitra momba ny sori-dalana na mampiditra loharano marobe amin'ny vahaolana amin'ny dashboard. SiteKick dia afaka mitantana ny tatitra ataonao miverimberina miaraka amin'ny tatitra isan-kerinandro, isam-bolana ary isan-telovolana.
Ny tatitra tsirairay dia ao anaty endrika fampisehoana (PowerPoint) ary azo asiana marika, misy marika fotsy amin'ny maso ivoho na ny mpanjifanao, ary ny valiny dia azo ovaina na fampahalalana fanampiny omena alohan'ny andefasana ny mpanjifanao.
SiteKick dia manome ireto tombony manaraka ireto
Tatitra momba ny loharano marobe - Ampifandraiso ny angona Google, Facebook, ary / na Microsoft anao, raiso ny kaonty izay tianao hotaterina, ary avelao ny SiteKick hanao ny ambiny.
Karta matanjaka - SiteKick dia manangana tabilao sy kisarisary tsara tarehy miaraka amin'ny fanazavana an-tsoratra isaky ny fantsona.
Tatitra Multi-Channel - SiteKick dia manadihady ny fantsona rehetra, mahita ny fomba fijery mampiseho ny sandainao: fampielezan-kevitra lehibe, valiny SEO vaovao, ary maro hafa.
Mifanaraka sy mizana - SiteKick dia manadihady ny angon-drakitra rehetra, mifantina ireo voka-pikarohana lehibe, ary manolotra azy ireo amin'ny fomba sy ny tonony tsy miova. Mitantana mpanjifa maro kokoa ary avelao ny ekipanao hifantoka amin'ny valiny, fa tsy ny tatitra an-tanana.
Fanentanana momba ny fampielezan-kevitra sy daty - Ny tatitra rehetra dia azo ampitahaina amin'ny vanim-potoana teo aloha na amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa ho an'ny mpanjifa vanim-potoana.
Ampidirina ny fampidirana Sitekick sy loharanom-pahalalana
Google Analytics - Fomba fijery matihanina ao amin'ny Google Analytics. Manazava ny fironana momba ny fotoam-pivorian'ny mpanjifa, ny fiovam-po, ny tanjony, ny fahombiazan'ny fantsona ary ny pejy fandraisana.
Google Ads - Tatitra Google Ads misy marika fotsy izay mampiseho ny fiatraikany amin'ny tolotra fikarohana, fampisehoana ary horonan-tsary. Atsofohy ao anaty vondrona doka, teny lakile, fangatahana ary maro hafa.
Google Search Console - Tatitra momba ny filaharana teny lakile, ny fahatsapana fikarohana voajanahary ary ny tahan'ny tsindry-through, ary ny pejy fitobiana lehibe.
Google Business - Tatitra momba ny Google My Business misy marika fotsy izay mampiseho ny fiantraikany amin'ny antso eo an-toerana novolavola, ny fangatahana torolàlana mitondra fiara, ary ny fanamarihana azon'ilay orinasa.
Facebook Ads - Fanehoan-kevitra mandeha ho azy sy an-tsoratra ao amin'ny Facebook Ads. Azavao mazava tsara ny fantsona, ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra ary asehoy ny fomba rehetra ataon'ny mpanatrika amin'ny doka an'ny mpanjifa.
Pejy Facebook - Tatitra amin'ny pejy Facebook izay milaza amin'ny mpanjifa ny fifandraisan'izy ireo amin'ny mpihaino azy. Asehoy hoe isaky ny inona ny mpihaino mandray anjara amin'ny lahatsoratra ary mianatra izay mandeha.
Microsoft Ads - Fampandrenesana Microsoft Ads misy marika fotsy izay mampiseho ny fiantraikany amin'ny fikarohana, fampisehoana ary fanentanana amin'ny horonan-tsary. Atsofohy ao anaty vondrona doka, teny lakile, fangatahana ary maro hafa.
MailChimp - Asehoy ny fampisehoana mailakao amin'ny alàlan'ny fanaovana tatitra Mailchimp mandeha ho azy. Mitrandraha amin'ny andro tsara indrindra handefasana, tsipika lohahevitra tsara indrindra ary ny haben'ny mpihaino.
Emma mailaka - Asehoy ny fampisehoana mailakao amin'ny alàlan'ny fanaovana tatitra automatique an'i Emma. Mitrandraha amin'ny andro tsara indrindra handefasana, tsipika lohahevitra tsara indrindra ary ny haben'ny mpihaino.
Google Sheets - Ampidiro ao amin'ny tatitry ny SiteKick anao ny angona hafa, mandeha ho azy, amin'ny alalàn'ny fidirana Google Sheets vaovao. Mamorona latabatra sy tabilao manokana ho an'ny tatitra momba ny SiteKick, miaraka amin'ireo fampidirana hafa rehetra.
Makà tatitra maimaim-poana izao!
Tags: fitaovan'ny masoivohofitateran'ny mpanjifaTatitra mailaka Emmafacebook adsdoka googleGoogle Analyticsgoogle ny orinasakokonsole fikarohana googletatitra momba ny mailchimpdoka mikrosoftPower Point
Birdie: Fikarohana momba ny tsenan'ny AI
Crello: Tonian-tsary momba ny karama omena vola miaraka amina maodely tsara tarehy an'arivony